Ny lalao lalao chess tsara indrindra ho an'ny PC | Vaovao momba ny gadget
Paco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | Nohavaozina amin'ny 09/04/2021 18:39 | General, Videogames
Raha misy kilalao kilalao mahazatra sy mahafinaritra, izay ilana ny fifantohan-tsaintsika handresena, dia tsy isalasalana fa ny Chess, lalao amin'ny birao izay ny tetika sy ny fieritreretana tsara ny hetsika tsirairay no ho fanalahidin'ny fiafarana mpandresy. Ity lalao ity dia nahita ny fiandohany tamin'ny taona 600/800 taorian'i Kristy ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao niditra tany Espana tamin'ny alàlan'ny Arabo izy. Tsy misy isalasalana, lalao tantara iray izay mbola tanora na eo aza ny fahaverezan'ny setroka be tamin'ny vanim-potoana niomerika.
Tena mahazatra antsika izao ny mahita olona milalao lalao Chess. Amin'ny vanim-potoanan'ny telefaona finday sy lalao video dia toa sarotra ny mahita zazalahy na lehilahy antitra milalao lalao amin'ny solaitrabe mahazatra, ka ny safidy tsara indrindra raha te-hanao lalao catur dia ny fanaovana azy amin'ny endrika horonan-tsary lalao. SAINGY Tsy lalao fotsiny io, fa ny chess dia heverina ho fanatanjahantena manan-tsaina ary fifaninanana lehibe no lalaovina manerantany miaraka amin'ny lalao mety haharitra 6 ora. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny lalao chess maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny PC.
1 Lalao chess ho an'ny PC
1.3 Titans catur
2 Tranonkala hilalao échec
Lalao chess ho an'ny PC
Handahatra amin'ny antsipiriany ao anaty lisitra kely ireo lalao chess manintona indrindra azontsika atao amin'ny sehatra PC, izy rehetra dia manana fampiharana karama na maimaim-poana amin'ny safidin'ny mpilalao. Azontsika atao ny mahita amin'ny lalao kilasika amin'ny refy 2 na lalao feno pitsopitsony amin'ny refy 3 miaraka amin'ny sary marim-pototra.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo lalao chess amin'ny sary tsara indrindra izahay, lalao iray mifantoka manokana amin'ireo mpilalao tsy dia manana traikefa te-hankafy traikefa izay mahafa-po satria mahafinaritra ny maso izany. Lohateny tena atolotry ny lehibe amin'ity fanatanjahantena ity miaraka amin'ny fanehoan-kevitra sy tahiry lehibe misy ny sasany amin'izy ireo, toy ny Kasparov lehibe. Ity lalao ity dia mamakafaka ihany koa ny fomba filalaovantsika mba hametrahana ny tenantsika amin'ny laharana iray ary hifanandrinana amin'ireo mpanohitra mitovy lenta amintsika.
Manana dinika anatiny izahay ahafahantsika mamaha ny fisalasalana amin'ireo mpilalao hafa na maneho hevitra momba ny lalaon'izy ireo hita amin'ny lalao hafa. Ny saingy amin'ity lalao lehibe ity dia ny vidiny ary izany dia mitentina € 50 ka na dia lalao mahafinaritra aza dia somary mandrara ny vidiny raha tsy te-hilalao lalao tokana isika.
Nasongadinay ny fizarana sary tamin'ny lalao teo aloha ary ity Chess Ultra ity dia tsy dia taraiky loatra amin'io lafiny io, satria izy io dia iray amin'ireo lalao caturà miaraka amin'ny sehatra teknika tsara indrindra ao amin'ilay lisitra. Afaka mampiseho antsika ny lalao sary hatramin'ny fanapaha-kevitra zanatany 4K. Izy io dia manana maodely mpilalao tokana ary maody marobe marobe ahafahantsika mahita mpifaninana saika eo noho eo.
Raha ny hilalao irery no tadiavintsika dia manana fomba lalao marobe isika ary faharanitan-tsaina artifisialy tena miasa tokoa, manome antsika lalao mahery sy maharitra toy ny hoe tena lalao io. Lalao tena atolotra ho an'ny mpankafy lalao échec. Tsy toy ny teo aloha, ity iray ity dia manana vidiny mahaliana € 5,19 amin'izao fotoana izao Steam.
Handeha amin'ny lalao maimaim-poana voalohany amin'ny lisitra isika izao ary angamba iray amin'ireo tsara indrindra satria mankafy fizarana teknika tsara sy antsipiriany tsara. Manome antsipiriany tsara amin'ny tsipika sy ny sombin-javatra izy io. Ity lalao ity dia malaza be amin'ireo mpitia catur satria maimaimpoana ary noho ny fiarahamonina lehibe miaraka aminy.
Manana ambaratongam-pahasarotana samihafa isika afaka mankafy ny lalao na inona na inona fahaizantsika. Ampirisihina isika hanomboka amin'ny ambany indrindra raha harafesina isika. Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, maimaim-poana tanteraka ny lalao ary azontsika atao ny misintona azy avy amin'ny anao Pejin-tranonkala.
Tonga tao amin'ny iray amin'ireo lalao tsotra sy fohy indrindra eto amin'ny lisitra izahay, miaraka amina endrika kely indrindra izay mampahatsiahy antsika bebe kokoa ny lalao finday fa tsy ny lalao computer, miaraka amin'ny fizarana sary tsotsotra kokoa. Ity Zen Chess ity dia mifantoka amin'ny mpijery tsotra izay mitady hilalao kilalao malaky sy haingana nefa tsy misy fandokafana be.
antsika mahita fanamby maro isika handresena noforonin'ireo tompo tsara indrindra amin'ny tontolon'ny lalao caturRehefa mandroso isika, dia mihasarotra hatrany ny fanamby, na dia mbola tsy miova hatrany aza ny tanjontsika, dia ny mijery ny mpiara-miasa faran'izay haingana mba hiafara amin'ny fandresena ny lalao. Tsotra ihany koa ny vidiny ary ahitantsika azy io Steam ho an'ny € 0,99, tena atolotra raha miala voly fotsiny ny zavatra tadiavintsika.
Lucas Chess dia lalao misongadina amin'ny loharano misokatra, noho izany dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny tranokalany. Manana maody lalao hatramin'ny 40 izahay izay ahafahantsika manomboka amin'ny farany ambany handresena ny tenantsika mandra-pilalaovantsika lalao toy ny tena tompony. Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mifanaraka tanteraka amin'ny ambaratongan'ny olana tsirairay avy Amin'ny ambaratonga avo indrindra dia manolotra lalao epic misy kalitao lehibe izy.
Manana fomba multiplayer hiatrehana mpilalao manerana an'izao tontolo izao misy kalitao tena tsara. Mampiavaka ny lalao be dia be ny fikirana sy ny fikirakirana Azontsika atao ny manova ny lalao amin'ny fotoana rehetra ary tsy manelingelina ny lalao raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tadiavintsika.
Lalao tena mahaliana hanombohana eo amin'ny tontolon'ny chess, satria programa noforonina sy hianarana. Izy io dia manana loka manokana maro ao amin'ny sehatra noho ny fahatsorany sy ny azy ambaratonga maro amin'ny fahasarotana, izay mamela ny fampifanarahana amin'ny karazana mpilalao rehetra. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity programa ity dia ny fisian'ny endrika marobe ary azontsika atao ny mahita azy amin'ny solosaina sy ny finday, ka tena atoro anao tokoa.
Ny lesoka lehibe indrindra dia ny amin'ny vidiny Ary tsy lalao mora vidy io, ny vidiny dia € 70 na dia manana kinova fitsapana mandritra ny 30 andro ho an'ny Mac na Windows aza izy, ary ny kinova finday kosa dia manodidina ny € 10 ary misy kinova maimaimpoana izay ahafahantsika mankafy raha sendrasendra isika mpilalao.
Araka ny voalazan'ny anarany, simulator lalao birao lehibe izy, nahazo laza be izy tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny lalao isan-karazany, fa ny fanamafisana ny lafiny lalao chess dia atolotra anao ao amin'ny forum maro natokana ho an'ny chess. Tsy toy ny hafa, ity lalao ity dia ahafahantsika mamorona lalao araka ny itiavantsika ny lalànantsika manokana, ary mahatonga ny chess hijanona tsy ho catur intsony.
Ary koa, araka ny efa noresahintsika dia afaka milalao isika lalao birao mahazatra maro hafa, toy ny takelaka, karatra, domino na koa Warhammer. Manana maody an-tserasera hilalao amin'ny mpilalao manerantany isika amin'ny alàlan'ny serivera Steam. Ny fifandraisan'ity lalao ity dia raha tsy mandeha araka ny nantenaintsika ny lalao dia afaka mamoaka ny hatezerantsika rehetra amin'ny tabilao lalao isika ary mamarana ny lalao amin'ny fomba sarotra, na dia mety tsy dia faly loatra aza ny mpifaninana amintsika. Ny lalao dia misy amin'ny Steam ho an'ny € 19,99 amin'ny kinova mahazatra na € 54,99 amin'ny kinova 4 pack izay misy ny atiny fanampiny rehetra.
Tranonkala hilalao échec
Eto isika dia hahita tranonkala sasantsasany ahafahantsika milalao échec an-tserasera tsy mila mametraka rindrambaiko amin'ny solosaintsikaTsy manana fepetra takiana farafahakeliny koa izahay satria hilalao amin'ny alàlan'ny streaming avy amin'ny tranokalanay ankafizinay.
Tranonkala malaza sy feno izay ahitantsika motera lalao sy birao filaharana misy toerana afaka mahita lalao mihoatra ny 5 tapitrisa isika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Raha te-hilalao amin'ny Internet isika dia hampifanaraka antsika amin'ireo mpifaninana arakaraka ny haavon'ny fahaizantsika. Manana maodely mpilalao tokana isika izay hisafidiananay ny olana.
Ity programa web ity misy toerana maro ho an'ny lalao, na dia mety ho tsotra aza izy io nefa tena niasa ary tombony lehibe dia ny fahafahantsika miditra amin'ny sehatra rehetra izay manana tranokala mirindra.
iray hafa Tranonkala malaza be amin'ireo mpankafy lalao échec, amin'ity tranokala ity dia afaka mizaha toetra ny fahaizantsika amin'ireo mpilalao an-tserasera hafa izahay, ary koa milalao manohitra ny faharanitan-tsaina mahery vaika. Mahita torohevitra sy fampianarana maro be koa izahay hanatsarana ny fahaizantsika ary hifaninanana.
Raha manontany isika hitanay ny karazam-baovao sy antontan-taratasy rehetra natolotry ny chess master tsara indrindra, ary koa birao mpampahalala vaovao ahafahantsika mahita ny vaovao rehetra momba ny échec na ny hetsika ho avy. Toy ny tranokala teo aloha, io dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra izay manana tranokala mirindra, mba hahafahantsika mankafy azy amin'ny finday.
Raha latsaka ny chess ary mitady fihetsem-po mahery vaika kokoa isika dia afaka mijery ity hafa lisitry ny lalao video ahitantsika ny lalao môtô tsara indrindra ho an'ny PC. Tokony holazaina fa misokatra amin'ny soso-kevitra rehetra izahay ary faly manampy anao amin'ny hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Ny lalao chess tsara indrindra ho an'ny PC